सफलता पाउन एडिसनका ५ मंत्रहरू | Nepalibiz.com.np ( nepali online directory and news portal site )
सफलता पाउन एडिसनका ५ मंत्रहरू
यस संसारमा समय समयमा केही यस्ता महान् व्यक्तिले जन्म लिएका छन् , जसले हाम्रो सोच्ने तरिका र संसारलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै परिवर्तन गरीदिएका छन् । यस्तै एक महान् विद्धान र वैज्ञानिक हुन् थोमस अल्वा एडिसन । जसले दुनियालाई देखाई दिए कि यस संसारमा केही पनि असम्भव छैन र असफलता पछि नै सफलताको कथा सुरु हुन्छ । एडिसन आफ्नो जीवनमा थुप्रै पटक असफल भए र कति पटक उनले आफ्नो कामको पुनः नयाँ सुरुवात् गरे तर पनि उनले कहिल्यै हार मानेनन् र सफल भएरै छोडे ।
एडिसनले आफ्नो जीवनकालमा थुप्रै आविष्कारहरु गरे, जसमा विद्युत् बल्ब, फोनोग्राफ आदि मुख्य छन् । यसबाहेक उनलाई पहिलो औद्योगिक अनुसन्धान प्रयोगशाला स्थापित गर्नका लागि पनि चिनिन्छ । एडिसनको जीवनबाट एउटा व्यक्तिले थुप्रै कुराहरू सिक्न सक्छ ।
१. असफलताको अर्थ हार्नु होइन ः एडिसनले आफ्नो जीवनमा थुप्रै पटक असफलताको सामना गरे तर उनले कहिल्यै हार मानेनन् । जब उनी बल्बको आविष्कार गरिरहेका थिए, त्यस बेला उनले हजारौँ पटक असफल हुनु प¥यो । यस संसारमा ८५ प्रतिशत मानिसहरू यस्ता छन् , जो एक पटक असफल हुना साथ हार मानी हाल्छन् र फेरि प्रयास नै गर्दैनन् । उनीहरू यो सोच्दैनन् कि असफल हुनु हार्नु होइन, बरु केही सिक्नु हो । एडिसनको अनुसार हाम्रो सबैभन्दा ठुलो कमजोरी हार मान्नु हो । सफल हुने सबैभन्दा सजिलो उपाय सधैँ एक पटक अझै प्रयास गर्नु हो । बारम्बार प्रयास गर्दा एक न एक दिन अवश्य लक्ष्य प्राप्त हुनेछ ।
२. व्यस्तताको बहाना नगर्नुहोस् ः यस संसारमा थुप्रै व्यक्तिहरू आफूसँग समय नै कम छ वा म व्यस्त छु भन्ने बहाना बनाउछन् । वास्तवमा समयलाई सही तरिकाले प्रबंध गर्न सके हरेक कुरालाई समय दिन सकिन्छ । त्यसैले म सँग समय नै छैन भन्न अब छोडी दिनुहोस् र सही तरिकाले समयको सदुपयोग गर्नुहोस् किनकि एडिसन एक वैज्ञानिक, लेखक तथा सफल व्यवसायी पनि थिए । उनले थुप्रै कुराहरुमा हात हालेका थिए र व्यस्त भए पनि समय दिएका थिए ।
३. ठुलो सफलताका लागि कडा मेहनत गर्नुहोस् ः यस संसारमा कडा मेहनतको कुनै विकल्प छैन । यदि तपाईँले कुनै क्षेत्रमा सफलता पाउनु छ भने कडा मेहनत गर्न सिक्नुहोस् । कडा मेहनत भन्नाले शारीरिक परिश्रम गर्नु मात्र होइन, बरु अझ राम्रो तरिकाले काम गर्नु हो । यदि तपाईँ कडा मेहनत गर्न हिच्कीचाउनु हुन्छ भने तपाईँ सफल बन्न सक्नु हुन्न । तपाईँले गरेको काम काम चलाउ मात्र हुनेछ । ठुलो सफलता पाउन तपाईँ त्यो काममा यसरी डुब्नुपर्छ मानौ त्यो एउटा खेल हो । यस संसारमा कुनै पनि काम शर्टकटमा हुँदैन । यदि एउटा परिक्षार्थीले राम्रो सँग पढ्दैन भने उ परीक्षामा पास हुन सक्दैन । त्यसैले एक पटक आफ्नो लक्ष्यलाई चिन्नुहोस् र त्यो पाउन का लागि कडा मेहनत गर्नुहोस् । एडिसनले एउटा बल्ब बनाउन हजारौ पटक प्रयास गरेका थिए । उनले दिन रात त्यसका लागि कडा मेहनत गरे र अन्त्यमा उनी सफल भएरै छाडे ।
४. कहिल्यै हार नमान्नुहोस् ः एडिसनका अनुसार जीवनमा असफल हुने केही व्यक्तिहरूले जब हार माने, त्यस बेला तिनीहरूलाई थाहै थिएन कि उनीहरू आफ्नो लक्ष्य सम्म पुग्न आटी सकेका थिए । त्यसैले सफलता प्राप्त नहुन्जेल सम्म निरन्तर रूपमा प्रयासरत रहनु पर्छ । हार मान्नु एउटा ठुलो गल्ती जस्तै हो । त्यसैले सफलता प्राप्त नहुन्जेल आफूलाई हार सहनका लागि तयार राख्नु पर्छ ।
५. सिकेर अघि बढी रहनुहोस् ः एडिसनका अनुसार हामी कुनै वस्तुको बारेमा १ प्रतिशतको दश लाखौ भाग बराबर पनि जान्दैनौ । यदि हामी कुनै वस्तुका बारेमा २५ प्रतिशत राम्रो सँग सिक्छौ भने हामी त्यस काममा मास्टर हुन पुग्छौ । तर यति धैरै कोही पनि सिक्न चाहदैनन् । सबैलाई काम होइन, आराम चाहिएको छ । हाम्रो जीवनले हामीलाई सधैँ सिकी रहनु पर्ने सन्देश दिन्छ । हामी जति धेरै सिक्छौ, त्यति नै धेरै विद्धान् बन्छौ । हाम्रो शरीरका लागि जसरी खानेकुरामा दिनहुँ नयाँ तरकारी चाहिन्छ, त्यसै गरी हाम्रो मस्तिष्कका लागि दिनहुँ नयाँ सोच चाहिन्छ, जुन मस्तिष्कका लागि एउटा खुराक जस्तै हो । यदि हामीमा सिक्ने खुबी छ भने मस्तिष्कले पनि सही तरिकाले काम गर्नेछ ।